Golaha Dhexe ee Qaramada Midoobey oo baaritaan ku bilaabaya geeridii Hammarskjöld - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xoghayihii guud ee QM Dag Hammarskjöld.
Golaha Dhexe ee Qaramada Midoobey oo baaritaan ku bilaabaya geeridii Hammarskjöld
La daabacay tisdag 11 februari 2014 kl 10.53
Hindise uu soo bandhigay Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-Moon ayaa ah in golaha dhexe ee QM ay dib baaritaan ugu sameeyaan habkii uu u geeriyoodey Dag Hammarskjöld oo lixdameeyadii xoghaye guud ka ahaa Qaramada Midoobey (QM). Sidaasna waxaa qoray wakaaladda wararka ee TT.
Xoghayihii guud ee QM ee xilligaas Dag Hammarskjöld ayaa kulan uu ku dhexdhexaadinayey dhinacyadii isku khilaafsanaa siyaasadda dalka Koongo, markii ay diyaaraddii uu saarnaa ay habeenkii u dhexeeyey 17 iyo 18 sebteember ee 1961 ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaraha ee magaalada Ndola ee dalkii horay loo oran jirey Nordrhodesia (haddana la yiraahdo Zambia). Dhammaan 16kii qof oo saarnaana halkaas ayey ku naf-baxeen.
Waxaa soo kordhaya cadaadiska lagu hayo hay’adda sirdoonka Maraykanka oo lagu magacaabo NSA in ay siideyso dokumeentiyada sirta ah oo ku saabsan burburka diyaaraddaas. Hans Corell oo ah khabiir ku xuquuqda dadka, horayna QM uga ahaa madaxa waaxda sharciyada ayaa wakaaladda wararka ee TT u sheegay in hindisahaani yahay mid lagu farxo.